कला छेत्रमा लाग़्न चाहानेहरुलाई सुवर्ण अबसर,देशब्या्पि रुपमा छनौट हुदै ! छु्टाऊनै नहुने - Mitho Khabar
June 20, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on कला छेत्रमा लाग़्न चाहानेहरुलाई सुवर्ण अबसर,देशब्या्पि रुपमा छनौट हुदै ! छु्टाऊनै नहुने
ष्ट्रिय यूवा संघ नेपालले वृहत सहभागीताको अपेक्षा गर्दै ‘म केही गर्छु’ शिर्षकमा लघु चलचित्र प्रतियोगीताको आयोजना गर्ने भएको छ । लकडाउनका कारण घरमै बसिरहेका यूवाहरुको समयको सदुपयोग यो प्रतियोगीताले हुने आयोजकले विश्वास लिएको छ ।
नेपालीले माल पाएर चाल नपाएको औषधिजन्य गुणले ‘भरिपूर्ण करीपत्ता’हेर्नुस केके औषधि हुञ्छ